မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ - ၂၀၁၈ သြဂုတ်လက Facebook ကို ဖုန်းမှ သုံးနေသူ တဦး
ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန် အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းတု သတင်းမှားတွေ များစွာထွက်လာတာကို အစိုးရက ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်မယ်လို့ဆိုနေပပေမယ့် တလကို အနည်းဆုံး သတင်းအမှားတွေတင်တဲ့ Facebook ပို့စ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက် ရှိနေတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မေခက အကြောင်းစုံကို ပြောပြမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုသူသန်း ၂၀ ကျော်အထိရှိလာတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဟာ သတင်းဖြန့်ဝေမှု အတွက် အရေးပါဆုံး နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လူမှုဘဝအတွက် အရေးပါလာသလိုပဲ ၊ အမုန်းစကား လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ သတင်းတု သတင်းမှားတွေ အများဆုံးပေါ်ပေါက်ရာနေရာတခုလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုသူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို အစိုးရ ဘက်က ထိန်းသိမ်းမှုပိုင်း အားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းတွေ ပြန့်နှံမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ "ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး" အဖွဲ့ရဲ့ အချက်အလက် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ ဦးသက်မင်းကတော့ လက်ရှိ လူမှုမီဒီယာမှာ သတင်းတု သတင်းမှားတွေ ပြန့်နှံနေမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ အထူးသတိရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြား တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သတင်းတု သတင်းမှားတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကာလ နီးလာတာနဲ့အမျှ ခပ်စိပ်စိပ် တွေ့လာရသလို တလ တလရာချီတဲ့ သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေ ထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"တလအတွင်းဆို အနည်းဆုံး ၂၀၀ကျော်လောက်တွေ့ရတယ်။ ခုကာလပိုဆိုးလာတယ်။ သတင်းမှားတွေ သတင်းအကြမ်းတွေ ၊အတည်မပြုရတာတွေကိုတင်နေကြတယ်။ ပိုပြန့်မြန်လာတယ်။ ပြန့်လာတဲ့ အခါမှာ သက်ရောက်မှုပိုများလာတယ်.ပါတီတွေဘက်က သတင်းမှားသုံးဖော်ပြတာထပ်စာရင် တဖက်ဖက်ကိုထောက်ခံသူတွေဘက်က တဖက်ပါတီကို အမှားတွေ အမုန်းသကားတွေ ထိုက်ခိုက်ဝေဖန်တာမျိုးတွေများပါတယ်။"
လူမှုကွန်ယက် Facebook ဘက်ကလည်း သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ လူမှုစံနှုန်းနဲ့ မညီတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ဖြုတ်ချအရေးယူမှုတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် နိုင်ငံ‌ရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေးအရ လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွေမှာ ဘက်လိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
Facebook အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေအတွက် သီးသန့်မူဝါဒချ လုပ်‌ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) နဲ့ လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး ကော်မရှင်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် နည်းပညာတွေ အသုံးချတတ်စေဖို့ လမ်းညွှန်ပေးတာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အမုန်းစကား၊ သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေ ဖြစ်လာရင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ချောချောမောမော အောင် မြင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုလာသူကတော့ PACE အဖွဲ့က စိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ပါ။
"စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်။ အဓိကကတော့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့ သတင်း တု၊သတင်းမှားနဲ့ကိုတော့ခွဲခြားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒါကိုရောထွေးအရေးယူတာမျိုးတော့လက်မခံဘူး။ အဲ ၂ခုကတော့ ခွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာတော့ သူစည်းမျဉ်းဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့လေ. အဲ၂ခုကိုသတိကြီးကြီးနဲ့ကိုင်တွယ်ရမယ်။မဟုတ်ရင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ထိခိုက်နိုင်တယ်။"
လတ်တလော ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာ အမုန်းစကားနဲ့ သတင်းတု သတင်းမှားတွေကို Facebook ပေါ် ဖြန့်ဝေပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာတွေ ရှိနေတာမို့ ဒီအပိုင်းကိုသေချာကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ အစိုးရဘက်က ကြိုးစားမယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အုပ်စုတစ်စုက ငွေပုံပေးကာ Facebook Group များ Page များဖွင့် သတင်းတု၊ သတင်းမှားဖြန့်ဝေနေမှုကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖော်ထုတ် အရေးယူသွားမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
မကြာခင်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ရလာတော့မှာဖြစ်လို့ Facebook လူမှုကွန် ရက်ပေါ်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပိုပြင်းထန်လာဖွယ် ရှိပါတယ်။
လက်ရှိကာလမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု မြင့်နေတာကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပိုင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက နေ လုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ ရှိနေချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေပိုများ လာနိုင်တာကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ကောကော်မရှင်အနေနဲ့ပါ ဒီအပေါ် ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖို့ လေ့ လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ထောက်ပြနေကြပါတယ်။
အစိုးရ သတိပေးတဲ့ကြားက ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအမှားတွေဖြန့်နေတဲ့ Facebook ပို့စ်ပေါင်း တလကို ၂၀၀နှုန်း လောက်ရှိ
ရှေးကောကျပှဲနီးလာခြိနျ အငျတာနကျအှနျလိုငျးပျေါက သတငျးတု သတငျးမှားတှေ မြားစှာထှကျလာတာကို အစိုးရက ထိနျးခြုပျကိုငျတှယျမယျလို့ဆိုနပေပမေယျ့ တလကို အနညျးဆုံး သတငျးအမှားတှတေငျတဲ့ Facebook ပို့ဈပေါငျး ၂၀၀ လောကျ ရှိနတေယျလို့ ရှေးကောကျပှဲစောငျ့ကွညျ့သူတှကေ ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။ စုံစမျးမေးမွနျးထားတဲ့ ရနျကုနျအခွစေိုကျ ဗှီအိုအေ သတငျးထောကျ မခေက အကွောငျးစုံကို ပွောပွမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အသုံးပွုသူသနျး ၂၀ ကြျောအထိရှိလာတဲ့ Facebook လူမှုကှနျရကျဟာ သတငျးဖွနျ့ဝမှေု အတှကျ အရေးပါဆုံး နရောတခုဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျလူမှုဘဝအတှကျ အရေးပါလာသလိုပဲ ၊ အမုနျးစကား လှုံ့ဆျောမှုတှနေဲ့ သတငျးတု သတငျးမှားတှေ အမြားဆုံးပျေါပေါကျရာနရောတခုလညျးဖွဈလာနပေါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ လူမှုကှနျရကျတှပေျေါမှာ နိုငျငံရေးအမွတျထုတျလိုသူတှရေဲ့ လုပျဆောငျမှုကို အစိုးရ ဘကျက ထိနျးသိမျးမှုပိုငျး အားနညျးမှုတှရှေိနတေယျလို့ ဝဖေနျမှုတှရှေိနပေါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲ သတငျးတှေ ပွနျ့နှံမှုနဲ့ပတျသတျပွီး လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့မှုတှေ လုပျနတေဲ့ "ဟုတျတယျ မဟုတျဘူး" အဖှဲ့ရဲ့ အခကျြအလကျ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့သူ ဦးသကျမငျးကတော့ လကျရှိ လူမှုမီဒီယာမှာ သတငျးတု သတငျးမှားတှေ ပွနျ့နှံနမှေုနဲ့ပတျသတျလို့ အထူးသတိရှိဖို့ လိုအပျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နိုငျငံရေးပါတီတှကွေား တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ နိုငျငံရေးအရ တိုကျခိုကျနတေဲ့ သတငျးတု သတငျးမှားတှကေို ရှေးကောကျပှဲကာလ နီးလာတာနဲ့အမြှ ခပျစိပျစိပျ တှလေ့ာရသလို တလ တလရာခြီတဲ့ သတငျးတု၊ သတငျးမှားတှေ ထှကျပျေါနတေယျလို့ သူကဆိုပါတယျ။
"တလအတှငျးဆို အနညျးဆုံး ၂၀၀ကြျောလောကျတှရေ့တယျ။ ခုကာလပိုဆိုးလာတယျ။ သတငျးမှားတှေ သတငျးအကွမျးတှေ ၊အတညျမပွုရတာတှကေိုတငျနကွေတယျ။ ပိုပွနျ့မွနျလာတယျ။ ပွနျ့လာတဲ့ အခါမှာ သကျရောကျမှုပိုမြားလာတယျ.ပါတီတှဘေကျက သတငျးမှားသုံးဖျောပွတာထပျစာရငျ တဖကျဖကျကိုထောကျခံသူတှဘေကျက တဖကျပါတီကို အမှားတှေ အမုနျးသကားတှေ ထိုကျခိုကျဝဖေနျတာမြိုးတှမြေားပါတယျ။"
လူမှုကှနျယကျ Facebook ဘကျကလညျး သူတို့ခမြှတျထားတဲ့ လူမှုစံနှုနျးနဲ့ မညီတဲ့ အကွောငျးအရာ တှကေို ဖွုတျခအြရေးယူမှုတှလေုပျဆောငျသှားမယျလို့လညျးထုတျပွနျထားပမေယျ့ နိုငျငံ‌ရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေးအရ လုပျဆောငျမှုပိုငျးတှမှော ဘကျလိုကျမှုတှရှေိတယျလို့ ဝဖေနျနကွေပါတယျ။
Facebook အနနေဲ့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံက လူမှုကှနျရကျအသုံးပွုသူတှအေတှကျ သီးသနျ့မူဝါဒခြ လုပျ‌ဆောငျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC) နဲ့ လညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနပွေီး ကျောမရှငျအတှကျ အထောကျအကူဖွဈမယျ့ နညျးပညာတှေ အသုံးခတြတျစဖေို့ လမျးညှနျပေးတာတှေ လုပျနတေယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
အမုနျးစကား၊ သတငျးတု၊ သတငျးမှားတှေ ဖွဈလာရငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ခြောခြောမောမော အောငျ မွငျဖို့ ခကျခဲနိုငျတယျလို့ ဆိုလာသူကတော့ PACE အဖှဲ့က စိုငျးရဲကြျောစှာမွငျ့ပါ။
"စိတျပူစရာကောငျးတယျ။ အဓိကကတော့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောခှငျ့နဲ့ သတငျး တု၊သတငျးမှားနဲ့ကိုတော့ခှဲခွားနိုငျဖို့လိုတယျ။ အဲဒါကိုရောထှေးအရေးယူတာမြိုးတော့လကျမခံဘူး။ အဲ ၂ခုကတော့ ခှဲနိုငျဖို့လိုတယျ။ ဖဘေု့တျပျေါမှာတော့ သူစညျးမဉျြးဆိုတာမြိုးရှိတာပေါ့လေ. အဲ၂ခုကိုသတိကွီးကွီးနဲ့ကိုငျတှယျရမယျ။မဟုတျရငျလှတျလပျစှာပွောဆိုခှငျ့ထိခိုကျနိုငျတယျ။"
လတျတလော ရှေးကောကျပှဲနီးလာခြိနျမှာ အမုနျးစကားနဲ့ သတငျးတု သတငျးမှားတှကေို Facebook ပျေါ ဖွနျ့ဝပွေီး နိုငျငံရေးအမွတျထုတျတာတှေ ရှိနတောမို့ ဒီအပိုငျးကိုသခြောကိုငျတှယျနိုငျဖို့ အစိုးရဘကျက ကွိုးစားမယျလို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန ညှနျကွားရေးမှုးခြုပျ ဦးဇျောဌေးက ပွီးခဲ့တဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောဆိုထားပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ရညျရှယျခကျြရှိရှိဖွငျ့ အုပျစုတဈစုက ငှပေုံပေးကာ Facebook Group မြား Page မြားဖှငျ့ သတငျးတု၊ သတငျးမှားဖွနျ့ဝနေမှေုကို စဈဆေးတှရှေိ့ရပွီး ပါဝငျပတျသကျသူမြားကို ဖျောထုတျ အရေးယူသှားမယျလို့လညျး ဆိုထားပါတယျ။
မကွာခငျမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှေ တရားဝငျမဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ ရလာတော့မှာဖွဈလို့ Facebook လူမှုကှနျ ရကျပျေါမှာ ပွိုငျဆိုငျမှုတှေ ပိုပွငျးထနျလာဖှယျ ရှိပါတယျ။
လကျရှိကာလမှာ ကိုဗဈကူးစကျမှု မွငျ့နတောကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးပိုငျးကို ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေ နေ လုပျဆောငျဖို့ကွိုးစားလာတာတှေ ရှိနခြေိနျမှာ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာသတငျးတု၊ သတငျးမှားတှပေိုမြား လာနိုငျတာကွောငျ့ အစိုးရအနနေဲ့ကောကျောမရှငျအနနေဲ့ပါ ဒီအပျေါ ထိထိရောကျရောကျကိုငျတှယျဖို့ လေ့ လာစောငျ့ကွညျ့သူတှကေ ထောကျပွနကွေပါတယျ။